Walk Master dia mizaha toetra anao amin'ny osy sy ny vatan-kazo | Androidsis
Walk Master dia iray amin'ireo lalao afaka mitsiky anao rehefa milalao lalao ianao noho io rafitra mandeha amin'ny tohatra omena anao io. Indrindra rehefa tsy maintsy ataonao amin'ny osy izay tsy maintsy mianatra mamindra ny kodiarana tsirairay mba hahazoana ny hery ilaina amin'ny manaraka.
Noho izany, tsikelikely, ary fihetsika isaky ny fihetsika, isika dia ho afaka hivoatra amin'ity lalao mahaliana ity ho an'ny Android izay, ankoatry ny fahafahantsika milalao amin'ilay osilahy adala, dia ho afaka mamoha olo-malaza mahatsikaiky marobe isika mba hipoaka amin'izao andro mafana sy fahavaratra izao. .
1 Tsy zavatra mora ny mandeha eo amin'ny tongo
2 Sakana, sehatra mihetsika ary maro hafa amin'ny Walk Master
3 Amboary ny toetranao
Tsy zavatra mora ny mandeha eo amin'ny tongo
Ao amin'ny Walk Master dia napetraka ho tanjona hianarana mandehana amin'ny vodilanitra lava ary izany dia hanery antsika hanapaka kely ny lohantsika amin'ny fizika zavatra sy ny hery misintona izay manana lanja lehibe amin'ny filalaovan'ity lalao mahafinaritra ho an'ny Android ity.
Tena tsotra izany. Miaraka amin'ny fihetsika amina sisiny lavidavitra iray, dia ho afaka hitondra ny tongotra voalohany miaraka amin'ny tohony mankany amin'ny toerana manokana isika. Mila mitandrina isika ary aza lava manalava ny dingana ka ny manaraka Andao tsy hijanona lavitra loatra isika, ary ny osidintsika adala dia tsy hipetraka malalaka malalaka saika eo an-tampon'ny fahazoana poara tsara.
Raha ny fanazavana, dia ho mampihomehy tokoa ny mahita azy mametraka azy ireo. Rehefa mametraka bebe kokoa na latsaka izay dingana mahazatra isika, mamoaka ny fihetsika isika ary mamorona iray hafa ho an'ny tongotra iray hafa miaraka amin'ny tohony, noho izany dia afaka mandeha isika ary hahatratra ny iray amin'ireo teboka fanaraha-maso ny ondrintsika. Amin'ny fotoana ahatontosanao ny hetsika dia ho hitanao fa hanana fotoana mihoatra ny fialamboly ianao.
Sakana, sehatra mihetsika ary maro hafa amin'ny Walk Master
Hatreto dia lavorary avokoa ny zava-drehetra ary ny osy dia efa mitantana ny kanto sarotra amin'ny stilts. Inona no mitranga fa Lehilahy roa sy alika, mpamorona an'ity fialamboly mahafinaritra ity, no manao izay sarotra be amintsika rehefa tsy maintsy mandeha isika pisinina misy piranha, lampihazo mihetsika avy eo ary manana ny fombany manokana hametrahana azy ireo izy ireo, na ireo lava lava izay hamoaka ny magma hiampitana ny osidintsika amin'ny lafaoro.
Izay fahasarotana rehetra mandeha amin'ny maha-base azy dia hampitomboina amin'ireo vato misakana rehetra ireo amin'ny lohateny vaovao ho an'ny Android izay tototry ny fomba sy ny famoronana. Ny marina dia manana fotoana mahafinaritra ianao gaga ny tenanao amin'ireo tratran'ilay mpihetsiketsika mahantra.
Protagonist azontsika soloina avy amina mpilalao mampihomehy hafa ary rehefa manana farantsakely vitsivitsy isika dia afaka mamoha ny sasany tampoka. Nampiasain'izy ireo tamin'ny fomba ampy izany mba tsy hanadinoantsika ilay osy mahantra amin'ireo maso manaitra ireo rehefa hiditra ao ilay mpikarakara ny taonjato. Azontsika atao ny mamoha zombie, tovovavy toa an'i Pipi Longstocking sy ny maro hafa.
Amboary ny toetranao
Tsy vitan'ny mamoha ireo tarehin-tsoratra ireo fotsiny isika, fa vitsy dia vitsy, fa afaka manamboatra azy ireo mihitsy aza misy satroka, akanjo ary maro hafa. Azontsika atao ny mahazo ireo farantsakely izay ilaintsika amin'ny alàlan'ny fandalovany ambaratonga miaraka amin'ny tontolo iainany, fa koa amin'ny fijerena dokam-barotra. Raha ny fanazavana, eto dia tena mahafinaritra ny mahita azy amin'ireo fotoana mampihomehy izay mahatonga ny toetranay hampihetsi-po anay amin'ny vatan'izy ireo.
Amin'ny lafiny teknika dia lalao efa vita tsara ary amin'izany izahay dia manasongadina ny fihetsiky ny vatan-kazo vita tsara amin'ny fihetsika ataontsika. Nanjary tena voajanahary ho antsika ny rafitra hanana fotoana mahafinaritra. Avy eo dia manana litera voafaritra tsara izahay, sakana samy hafa miaraka amin'ny fizika misy azy sy ireo tontolo iainana izay mandrisika antsika hanohy handroso mba hahafahana mamorona endri-tsoratra sy zavatra mahafinaritra kokoa.
Raha fintinina, inona Walk Master dia lalao mahafinaritra sy mahafinaritra ary voalohany tonga lafatra ho an'ireo andro tonga amin'ny fialan-tsasatra tsy misy zavatra hafa ankoatry ny fialamboly mahafinaritra. Manana izany maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store ianao. Izahay dia mamela anao amin'ny pataloha Stepy toy ny iray hafa handraisana tsikelikely.
Ny zava-kendrenao amin'ny fizika
Toetra mampihomehy sy mahatsikaiky
Sarotra kokoa izany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Miezaha manao ilay osilahy adala mandeha eo amin'ny vodiny amin'ny Walk Master mahafinaritra
Spotify Lite dia azo alaina ao amin'ny Play Store ankehitriny: azo atao ny mitahiry data raha azo atao ny mihaino ny mozika ankafizintsika